SPAM nke |bọchị | Martech Zone
Friday, February 23, 2007 Sọnde, Septemba 30, 2012 Douglas Karr
Ọbụna na nzacha SPAM niile dị n'ụwa, m ka na-enweta SPAM. Akpọrọ m SPAM asị, mana m ga-ekweta otu n'ime obi amamikpe m ka m na-enyocha SPAM, m na-agụkarị. Ana m enyocha ha ngwa ngwa iji gbalịa ịmata ihe ndị nza ahụ jidere bụ azịza dị mma. Oge ọ bụla ọzọ, agbanyeghị, m na-enyocha obere mkpuru.
Nke a bụ ọkacha mmasị m ikwu na Spam taa:
Nnọọ. Ekele m nye m ezigbo weebụsaịtị. Enwere m nnukwu ọ onụ na oge ị ga-ahụ ọmarịcha nwamba gị. Ọtụtụ succes na ozuzu.
Kedu ihe kpatara m ji nọrọ na BlogBurst?
Feb 23, 2007 na 8:06 PM
Tee .. Aka ike wee merie! Echela na ike nke 4 ụkwụ legged.
Btw, daalụ maka ileta “ọmarịcha nwamba gị!”
Feb 23, 2007 na 8:11 PM
Na-azụkwa nwamba! Nwoke ị bụ ihe ịtụnanya. Olee mgbe ihi ụra? 😉
Feb 23, 2007 na 8:28 PM
Hehe. Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-eche maka Stumpy… ọ bụ maka zefrank na nso nso a akụkọ ụra.
Zefrank bụ onye ọzọ n'ime obi ụtọ m ikpe.
Feb 24, 2007 n’elekere 2:16 nke abali
Nlekọta ịkọrọ gị ozuzu ndụmọdụ?
Ya mere, gịnị ka ị na-eme? Tinye ya n'ime ụlọ, kpọchie ya, laghachi na njedebe nke ụbọchị na bam, 10 obere mara mma kittens na-ele anya na nri ya? 🙂
Feb 24, 2007 n’elekere 8:57 nke abali
Na-akpa ọchị. Enwere m Jack Russell nke na-agaghị ekwe ka anụ ọ bụla ọzọ dị ndụ n’ụlọ anyị. Onye mbụ ya gburu bụ nnụnnụ anyị, Ozzy. Onye so ya bụ Gerbil nwa m nwoke zụtara nwa m nwanyị. Ọ bụ dinta… ndidi na-emetụta uche. Ma, anyị ka hụrụ ya n'anya.
Feb 26, 2007 n’elekere 9:04 nke abali
Commentsfọdụ ihe SPAM kwuru nwere ike ịdị na-atọ ọchị. You gbalịrị iji otu n'ime mgbakọ na mwepụ comment spam protection plugins? Achọpụtala m ha nke ọma na igbochi SPAM.
Nke a bụ nke m na-eji:
Math Comment Igha Spam.